44GB dia mitana an'ity sary ity amin'ny famahana am-pitoniana an'i La Ronda de La Noche | Famoronana an-tserasera
Raha manana monitor na televiziona 4K ianao, dia mamporisika anao izahay hitondra io rohy io amin'izay hahitanao azy amin'ny vahaolana avo lenta ny sary «The Night Watch» nataon'i Rembrandt.
Fotoana tsy manam-paharoa hankasitrahana ny antsipiriany rehetra momba ny fikosohan'ilay tompony lehibe amin'ity sary hosodoko ity izay anisan'ny iray amin'ireo fantany indrindra. Ny Rijksmuseum no izy nanao an'ity sary misy vahaolana ity fa rehefa mihalehibe izy io dia afaka manatona akaiky kokoa ny antsipiriany toy ny hoe misaintsaina manokana an'io asa lehibe io amin'ny tranombakoka holandey isika.
Ilay mpahay siansa momba ny angona Robert Erdmann dia nitarika ny ekipa sary Rijksmuseum dia naka ity sarin'ny The Night Watch na "The Night Watch" ity tamin'ny fampirantiana 528.
mandritra ny herinandro sary mizara ho 24 andalana 22 sary Natambatra tamina nomerika izy ireo noho ny tambajotran-tsofina sy teknolojia mamela ireo rendrarendra ireo hankafy sanganasa kanto toy ny hoe saika nokasihintsika tamin'ny masontsika izany.
Raha jerentsika ny lanjan'ny sary farany dia ahitana gigapixels 44,8 ary ny tsirairay amin'ireo piksely ireo dia eo amin'ny halavirana 20 micrometers amin'ny iray hafa. Azontsika atao ny manitatra sy manitatra azy io mba hananana antsipiriany izay tsy noeritreretinay avy tamin'ny fitaovantsika, na PC izany na finday misy efijery tsara be.
Noho izany dia manolo-kevitra izahay rohy misokatra avy amin'ny efijery 4K hankasitrahana ny antsipiriany rehetra ary gaga amin'ny iray amin'ireo sary hosodoko tsara indrindra an'ny tompony Rembrandt.
Araka ny efa nolazainay, a Vintana lehibe lehibe hanaovana zoom ny efijery ary avereno jerena ny pitsopitsony tsirairay avy amin'ny tadin'ny borosy nomen'ny iray amin'ireo tompon'ny sary hosodoko. Aza adino ary koa ho an'ny Thyssen Museum ary ireo fampisehoana manokana nandinihany ny tantaran'ny sary italiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Amin'ny famahana vahaolana hyper dia azonao jerena ny sary «The Night Watch» nataon'i Rembrandt
Izany no antony fiandrasana ela ny sarimihetsika Studio Ghibli vaovao